Jụọ Semalt: Gịnị Bụ Ụzọ Kachasị Mkpa Bibie Spam Ozi
Mgbe ị wụnye Google Analytics, ọ bụrụ na ị chọpụta na okporo ụzọ gị abawanyela, ọ bụ ihe ịrịba ama na ebe nrụọrụ weebụ gị na-enweta echiche ndị na-adịghị mma ma na ị ga-eme ihe iji kpochapụ ha ozugbo enwere ike.
Artem Abgarian, Onye Ọrụ Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ndị Nlekọta Ọkachamara , dọrọ aka ná ntị na ọ dị mwute ikwu na ọ dịghị ụzọ ọ bụla a ga - esi wepụ spam site nchịkọta Google na - adịgide adịgide. Otú ọ dị, ịnwere ike iwelata ihe ize ndụ dị iche iche site na ịme ọtụtụ ụzọ.
Ọkpụkpọ Spam na ojiji ha
Otu n'ime isi ihe mere anyị ji enweta spam na-egosi bụ spam bots. The hackers imewe ha na ọtụtụ ụzọ na-agbalị itinye ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na hacking na ebe nrụọrụ weebụ ha - web development app. Ha na-eziga itinye aka na igbe mbata gị ma mee ka ha nwere ike ịmepụta ọtụtụ okporo ụzọ. Mgbe ị pịrị na njikọ ndị ahụ, ị ​​ga-ahụ na saịtị gị na-enweta nza nke okporo ụzọ, ma okporo ụzọ enweghị ihe jikọrọ ya na eziokwu. Ndị hackers na-eji spam bots tọọ gị.
Ụdị Ntuziaka Spam
Ọkpụkpọ spam na-eji usoro dịgasị iche iche maka ịmepụta spam: site na ghost referrals na crawler referrals. Nchịkọta Google enweghi ike ịtụle ma ọ bụ kpee ikpe nke bụ onye na-ekwu okwu ntanta na ihe bụ nzaghachi nke mmụọ. Ndị nchọta aha na-apụta mgbe a na-akụ ndị nchịkọta Google gị site na adịgboroja ma ọ bụ na-amaghị ama, mgbe nzagharị crawler na-eme mgbe saịtị gị na-enweta ọtụtụ ọnụọgụ site na isi mmalite. Ịkwesịrị iwepụ bọtịnụ n'ihi na ị ga-ebelata ibu na sava gị na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ọ dịkwa mkpa ịnweta data ziri ezi si nchịkọta Google maka ahụike gị..
Isi Spam Ozi Ntuziaka
Ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ikwu na e nwere ọtụtụ spam ngalaba ma ama ama ndị bụ darodar.com, ilovevitaly.co, semalt.com, na bọtịnụ-for-website.com. Ọ dị mkpa ịhapụ ebe nrụọrụ weebụ ndị a na saịtị ndị ọzọ dịka ha nwere ike imebi saịtị gị ma nwee ike imebi Google AdSense gị.
Nwepu nke Bọọ na Egwurugwu Ndị Nwere Mma
Ị nwere ike wepu spiders ọma na bọọlụ site na data gị site n'ịgbanwe usoro gị. Ọ bụrụ na ịnweghị igbochi ma ọ bụ wepu ha ngwa ngwa o kwere mee, enwere ohere na saịtị gị ga-emebi. Ihe ka ọtụtụ n'ime bọọlụ na spiders na-ele anya na enyi-ụlọ, mana ha na-emebi gị data online na offline. Nchịkọta Google na-enye ọtụtụ ọnụọgụ, atụmatụ, aghụghọ, na aro iji wepu ha site na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ị nwere ike ịga na ngalaba nhazi ka ịlele mmelite ọhụrụ ma dozie ntọala gị.
Olee otú iji wepụ Ntuziaka Ndị Mmụọ?
Mgbe m nyochachara ihe ụfọdụ, achọtawo m na ọ dị mfe igbochi ndị na-ekwu okwu nke mmụọ site na ịwụnye ma rụọ ọrụ nzacha gị. Jide n'aka na ị na-eji ihe nzacha dịgasị iche iji mee ka nchekwa gị n'ịntanetị. Ikwesịrị ịtọzi ihe nzacha aha. Maka nke a, ị ga - etinye akara ID ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ gị. Ka m kwuo ebe a na bots nwere ọgụgụ isi; ha agaghị ekwe ka ohere ọ bụla pụọ ​​mgbe saịtị gị ma ọ bụ Google Analytics adịghị emebi.
Wepụ Spam Crawler Referral Spam
Ozugbo i mezigharịrị ntọala ahụ dị n'elu, nzọụkwụ ọzọ bụ imejuputa atumatu aha njirimara nke ga-eme ka saịtị gị na Google Analytics dị ize ndụ site na spam. I kwesịghị ichefu na ndị crawlers gara na saịtị gị ugbu a wee gbalịa imebi data gị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji wepụ ha site na saịtị gị na nchịkọta gị n'oge mbụ.